Ihe mgbochi: Mozenda Data Extraor - Ihe kachasị mma ma nwee ike ịkwado
Mozenda bụ ihe zuru ezu ọrụ ntanetị weebụ ; ọ kachasị mara maka njirimara na ikike ya ịrụ ọtụtụ ihe aga-eme n'otu oge. Ngwaọrụ a na-enye gị ohere wepu ọdịnaya site na Aliexpress. com, Boohoo. com, Amazon, na eBay - pneumatici sailun test. Ị nwere ike ichekwa faịlụ na Dropbox na Google mbanye, ma ọ bụ ibudata ya na diski ike gị.
Olee otú Mozenda si arụ ọrụ?
Mozenda na-arụ ọrụ ya dị ka usoro ndị a:
1. Ọ na-ewepụta data site na ọtụtụ saịtị. Nke mbụ, Mozenda na-akọwa usoro iheomume.
2. Na nzọụkwụ na-esonụ, ọ na-ejikọta datasets.
3. Nke atọ, Mozenda na-ebute nsonaazụ abụọ ọrụ nchekwa igwe ojii abụọ: Dropbox na AWS.
1. Nchịkọta Mkpokọta weebụ Mozenda - Ngwa weebụ a na-enye anyị ohere ịgafe ndị ọrụ anyị (ọrụ nchịkọta). Anyị nwekwara ike ịlele ma hazie nsonaazụ ya na mbupụ ngwaahịa a na CSV na JSON.
2. Onye Ọrụ Ntuzi - Ọ bụ ngwa Windows na-eji rụọ ọrụ ọtụtụ nchịkọta data n'otu oge ahụ.
Akụkụ dị iche iche nke Mozenda:
1. Kọmputa na-abanye na ya:
A maara Mozenda kachasị mma maka njirimara enyi ya. Ọ bụghị naanị onye ntanetị weebụ kamakwa onye na-agba ụra; software a na-eji bọtịnụ dị iche iche na-awagharị ibe weebụ gị. Ọ nwere ike wepụ data site na ebe nrụọrụ weebụ amachibidoro iwu, ma naanị ị ga-emerịrị URL ahụ iji kpochapụ ya ozugbo. Ọzọkwa, ọ na-enye spam nchebe ma dozie obere njehie na ọdịnaya gị.
2. Okwesịrị maka obere ụlọ ahịa:
Dị ka mmalite, ọ gaghị ekwe omume gị itinye ego na ego scrapers data ma ọ bụ crawlers weebụ. Otú ọ dị, Mozenda bụ software n'efu nke nwere ike ịrụ ọrụ dị egwu na-adaba adaba. Ọ na-enyocha akwụkwọ weebụ, na-anakọta ozi gbasara ndị asọmpi, ọnọdụ ndị ọhụrụ, ahịa ndị na-apụta, ma nweta ihe ndị ị chọrọ na nkeji nkeji. Mozenda dị mma maka ndị na-enweghị ego na obere ụlọ ọrụ na-anaghị achọ ka ị nweta ikikere ma ọ bụ mmemme mmemme.
3. Wepuchaa ebe nrụọrụ weebụ niile:
Ọ bụrụ na ị na-achọ ilekọta ebe nrụọrụ weebụ niile, Mozenda bụ nhọrọ kwesịrị ekwesị maka gị. Ndị nchọpụta chọrọ inweta ozi site n'akwụkwọ akụkọ na e-akwụkwọ iji duzie ha. Ngwá ọrụ a na-enye aka ịnakọta data ruru eru na nhazi data n'ụzọ ka mma, ụlọ ọrụ nwere ike iji Mozenda malite na ịzụ ahịa dị iche iche.
4. Ọ dị mma ịmara:
Ọ bụrụ na ị malitere ịmepụta ma ọ bụ chọọ ịkwalite ngwaahịa na ọrụ gị n'ịntanetị, ị ga-eji Mozenda. Site na ọrụ nchịkọta data , ịnwere ike ịnakọta data, nyochaa ọtụtụ nyocha ma nyochaa àgwà nke akwụkwọ gị. Ọzọkwa, ngwá ọrụ a na-enye aka ịmepụta ndị ọzọ na-eduzi ma na-akwalite ụdị gị na mgbasa ozi mgbasa ozi n'ụzọ dị irè ma rụọ ọrụ nke ọma. Na nkenke, ị nwere ike ịzụlite azụmahịa gị site n'iji ngwanro a ma nwee ike ime ka ndị ahịa nwere ike ịnweta ụwa niile.